Siyaasiga Ismaaciil Buubaa oo loo diiday inuu ka dhoofo garoonka magaalada Hargeysa – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Siyaasiga Ismaaciil Buubaa oo loo diiday inuu ka dhoofo garoonka magaalada Hargeysa
Wararka naga soo gaaraya magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland ayaa sheegaya in siyaasiga Ismaaciil Maxamuud Hurre (Buubaa) loo diiday inuu ka dhoofo garoonka diyaaradaha ee Cigaal International Airport ee magaalada Hargeysa.
Ciidamo ka tirsan kuwa laanta socdaalka ee garoonka diyaaradaha magaalada Hargeysa ayaa la sheegayaa inay Siyaasi Buubaa u diideen inuu garoonkaasi kaga dhoofo baasaboor Diplomasi ah oo ay leedahay dowladda federaalka Soomaaliya.
Wararka ayaa intaasi ku daraya in siyaasi Buubaa uu diiday inuu badelo baasaboorkiisa diplomaasiga ee Soomaaliga ah islamarkaana uu qaato baasaboorka Somaliland, taas oo keentay in laga reebo diyaaradii uu xilligaasi raaci lahaa.
Siyaasi Buubaa ayaa la sheegayaa in xilligaasi uu kusii jeeday magaalada Nairobi ee caasimadda dalka Kenya.
Siyaasiyiinta maamulka Somaliland ayaa xilliyadda ay ka dhoofayaan dalka waxay adeegsadaan Baasaboorka Soomaaliya, iyagoona dadkooda u sheega inay ku dhoofaan baasaboorka uu maamulkoodi sida goonida ah u sameeystay.
Dhinaca kale, siyaasi Ismaaciil Buubaa oo hore usoo qabtay xilka wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya ayaa ka mid ahaa siyaasiyiinta sida weyn ugu ololeyn jirtay midnimada Soomaaliya iyo Somaliland.
Siyaasi Ismaaciil Maxamuud Hurre (Buubaa) oo haatan ka mid ah xisbiga mucaaradka ee Wadani ayaa dhawaan magaalada Hargeysa kaga dhawaaqay inuu ka tanaasulay fikirkiisa ahaa midnimada Soomaaliya.